दोहोरीएर जन्डिसको समस्या हुन्छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस् – Jagaran Nepal
दोहोरीएर जन्डिसको समस्या हुन्छ ? यी घरेलु उपाय अपनाउनुहोस्
जन्डिस आफैँमा रोग होइन, बरु एउटा गहिरो रोगको लक्षण हो । जन्डिस भएपछि कलेजो विग्रने र भाइरल हेपटाइटिस हुने गर्छ जसको उपचार निकै कठिन मानिन्छ । मलेरिया, हेपटाइटिस ए लगायतका रोगका कारण पनि जन्डिस हुने गर्छ । प्रारम्भिक रुपमा पहिचान गर्न सकेमा कतिपय अवस्थामा जन्डिसलाई घरमै उपचार गर्न सकिन्छ ।कतिपयलाई जन्डिसको समस्या दोहोरियर पनि हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा जन्डिसका लक्षण देखानासाथ घरेलु उपाय अपनाउने र खानपानमा ध्यान दिए जन्डिस निर्मुल बनाउन पार्न सकिन्छ। जन्डिस उपचारका केही प्रमाणित घरेलु उपाय यस्ता छन् ।
ग्रोजबेरीः ग्रोजबेरीमा भिटामिन सी पर्याप्त पाइन्छ । जन्डिसको लक्षणहरु अन्त्य गर्न वा जन्डिस भइसकेपछि पनि यसबाट मुक्त पाउन यसले निकै सहयोग पुर्याउछ ।
कागतः कागतीमा भएको रोग प्रतिरोधी तत्वले पनि जन्डिस उपचारमा सहायक सिद्ध हुन सक्छ । कागतीले रोकिएका आन्द्राका नलिहरुलाई खुलाइदिनुका साथै रोगीले खाएको खानेकुरा पचाउन पनि मद्दत गर्छ । यसरी बनाएर खाएको कागती पानीले कलेजोको कोषलाई हानी हुनबाट बचाउछ ।
कसनीको बिरुवाः यो आफैमा औषधी हो। कलेजोको रोग उपचारका लागि कसनीका सबै भाग जस्तै फुल, विया, जरा र बोक्रा समेत प्रयोग हुन्छ । यसको जुस पिउनाले कलेजोेलाई सक्रीय रुपमा काम गर्छ ।
गाँजरको जुसः गाँजरको ताजा जुस बनाउनुहोस् र दिनमा पाँच सात पटक पिउनुहोस् । गाँजरका टुक्रालाई रोगीले खाने खानामा समेत मिलाए दिनुपर्छ ।